मैसाचुसेट्स WIC | जेपीएमए, इंक
WICShopper २०१ 2015 को अप्रिलमा म्यासाचुसेट्स डब्ल्यूआईसी कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई जारी गरिएको थियो। पहिलो weeks हप्तामा अनुप्रयोग उपलब्ध भएको थियो, 6०,००० भन्दा बढी शपिंग यात्रामा १ 15,000,००० भन्दा बढी परिवारहरू सामेल भए र WICShopper प्रयोग गरे!
म्यासाचुसेट्स WIC कार्यक्रम पनि प्रयोग गर्दछ WICSmart, JPMA द्वारा मोबाइल उपकरण-आधारित पोषण शिक्षा प्लेटफर्म। क्लिक गर्नुहोस् यहाँ JPMA र मैसाचुसेट्स WIC बीच साझेदारीको बारेमा थप पढ्न।
Mass WIC लाई सोध्नुहोस्!
"Ask Mass WIC" ब्लग मास WIC कार्यक्रममा आमाहरूका लागि उत्तम सल्लाह र सल्लाहले भरिएको छ। तनावबाट राहत पाउँदा व्यंजनहरुमा, सोध्नुहोस् मास WIC सँग सबैका लागि केहि छ।
ब्लग भ्रमण गर्नुहोस्
WIC कार्यालय स्थानहरू
तपाईंको क्षेत्रमा WIC कार्यालयहरूको लागि स्थानहरू र सम्पर्क जानकारी पत्ता लगाउनुहोस्।
कार्यालयहरू फेला पार्नुहोस्
फ्लायर डाउनलोड गर्नुहोस्
Mass WIC कार्यालयका सहभागीहरूको लागि उपलब्ध WICShopper उडानकर्ता हेर्नुहोस् वा डाउनलोड गर्नुहोस्।
यो अनुप्रयोग बनाउनको लागि धन्यबाद!
म चार बच्चाहरुको लागि एक आमा हुँ र मँ के थिए कागज गुमाउन। यो अनुप्रयोग महान भएको छ। मेरो मुटु बाट धन्यवाद। हामी म्यासाचुसेट्सबाट हौं र मेरी-बर्षेली छोरीलाई हामी के पाउन सक्छौं र के प्राप्त गर्न सक्दैनौं भनेर जाँच गर्न मन पराउँछन्।
MA WIC सहभागी
तयार पार्न तयार हुनुहुन्छ?
हामीले WICShopper तपाईंको परिवारको लागि खाना पकाउन रमाईलो र स्वादिष्ट बनाउनका लागि धेरै रमाईलो रेसिपीहरू प्रदान गरेका छौं। नयाँ स्वाद खोज्दा रमाईलो गर्नुहोस्। यी व्यंजनहरु एक चोटि दिनुहोस् - तिनीहरू विशेष गरी व्यस्त आमाहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न डिजाइन गरिएको हो।
JPMA, Inc. द्वारा बनाइएको प्रतिलिपि अधिकार २०१२ - २०२१ | सबै अधिकार सुरक्षित।
English Español العربية ဗမာစာ Afsoomaali नेपाली Français Português Русский Kiswahili 简体中文